Umsonto wenqwelomoya ukwabizwa ngokuba ngumsonto wokuphela, kwaye ukumila kwawo kwamazinyo kuyafana nomsonto oxande, kodwa umsonto osisicaba uqhele ukusetyenzwa kumsonto ogqityiweyo kwisilinda okanye kwidiski. Ukuhanjiswa kwesixhobo sokujika xa kuthelekiswa nomsebenzi xa kusenziwa umsonto wenqwelomoya ngu ...
ngomphathi ku 21-01-10
Kwinkqubo yokuvelisa sokubumba, isahlulo ukuyila ukungunda kudla kufuneka umphezulu olukhazimlisiweyo. Ukulawula ubuchwepheshe bokucoca kunokuphucula umgangatho kunye nobomi benkonzo yokubumba kwaye ngaloo ndlela kuphuculwe umgangatho wemveliso. Eli nqaku liza kwazisa umgaqo osebenzayo kunye nenkqubo ...
Crankshafts ezisetyenziswa ngokubanzi iinjini. Okwangoku, izinto zeinjini zeemoto ikakhulu ziyintsimbi kunye nentsimbi. Ngenxa yokusika okuhle kokusebenza kwentsimbi ye-ductile, unyango olwahlukeneyo lobushushu kunye nonyango lokomeleza umphezulu lwenziwa ukuphucula amandla okukhathala, ubulukhuni kunye ...
Umatshini wokumakisha kwiziko lokuchwetheza yenye yezona zicelo zibalulekileyo. Kwinkqubo yokulungiswa kwemisonto, umgangatho kunye nokusebenza kakuhle koomatshini kuchaphazela ngokuthe ngqo umgangatho kunye nokusebenza kwesahlulo. Apha ngezantsi siza kwazisa ngeendlela zokulungisa imisonto eziqhele ukusetyenziswa ...
I-CNC lathe processing processing isisiseko seempawu zezi: 1. Amandla okusila aphezulu. Ivili lokugaya malunga nomsebenzi wokujikeleza ngesantya esiphezulu, ihlala ifikelela kwisantya sevili35m / s, malunga namaxesha angama-20 ngesixhobo esiqhelekileyo, umatshini unokufumana inqanaba lokususa isinyithi ngaphezulu. Ngophuhliso lwe ...
Unyango lomhlaba olwa ne-anti-corrosion, kubalulekile ukuqokelela!
Izinto zokubopha zezona zinto zixhaphakileyo kwizixhobo zoomatshini, kwaye umsebenzi wazo ubaluleke kakhulu. Nangona kunjalo, ukubola kokuqina ngexesha lokusebenzisa yeyona nto ixhaphakileyo. Ukuthintela ukubola kokuqina ngexesha lokusebenzisa, abavelisi abaninzi baya kuthatha unyango lomphezulu emva ...
Indlela To Sika High-amandla Steel In Production Mechanical?
Isinyithi samandla aphakamileyo songezwa ngamanani ahlukeneyo ezinto zokuhlanganisa intsimbi. Emva konyango lobushushu, izinto ze-alloying zomeleza isisombululo esiqinileyo, kunye nesakhiwo se-metallographic ikakhulu yi-martensite. Unamandla amakhulu kunye nobulukhuni obuphezulu, kwaye ubungqongqo bayo bokusebenza buphezulu kakhulu ...
Ungayiphucula njani iMveliso yoLwakhiwo?
Imveliso yezabasebenzi ibhekisa kwinani lexesha umqeshwa avelisa ngalo imveliso efanelekileyo ngexesha ngalinye okanye ixesha elithathwayo ukwenza imveliso enye. Ukwanda kwemveliso yingxaki ebanzi. Umzekelo, ukuphucula uyilo lobume bemveliso, ukuphucula umgangatho we-manufacturi erhabaxa ...
Kwabo benza imishini, ukuphucula amandla abo okusebenza kubalulekile ukuba bafunde inkqubo yomatshini we-CNC. Ukuze ube yinkosi ye-CNC (iklasi yokusika isinyithi), kuthatha iminyaka emi-6 ubuncinci ukusuka kokuphumelela eyunivesithi. Kuya kufuneka ukuba abe nayo yomibini inqanaba lethiyori yenjineli ...
Zeziphi iindlela zokuthintela ukukhulula iibholiti ngexesha lokuchwetheza?
Njengesivali, iibholiti zisetyenziswa kakhulu kwizixhobo zamandla, oomatshini abasebenza ngoomatshini nangombane nakwamanye amashishini. I-bolt yenziwe ngamacandelo amabini: intloko kunye ne-screw. Kufuneka isebenzisane nenutin ukuqinisa amalungu amabini ngemingxunya. Iibholiti azinakususwa, kodwa ziya kukhululeka ukuba ...
Uyenza lula njani inkqubo yolawulo yokuqhubekekisa izityalo ngomatshini?
Nokuba yinkampani yeqela elikhulu okanye indawo encinci yokulungisa izinto, kuyimfuneko ukuphatha kakuhle ukuba ufuna ukusebenza kwaye wenze inzuzo. Ulawulo lwemihla ngemihla, ikakhulu kukho izinto ezintlanu: ulawulo lokwenza izicwangciso, ulawulo lwenkqubo, ulawulo lombutho, ulawulo lobuchule ...
Indlela Yokunciphisa Deformation in CNC Wire Cutting Process?
Ngenxa esemgangathweni ophezulu wemveliso kunye nokuchaneka, i-CNC machining isetyenziswa ngokubanzi kwicandelo lokuchwetheza. Inkqubo yokusika yocingo ye-CNC, inkqubo yokugqibela yezona zinto zigqityiweyo zokusebenza, kuhlala kunzima ukuzenza xa indawo yokusebenza ikhubazekile. Ke ngoko, kubalulekile ukuthatha amanyathelo ahambelanayo ...